Odisha Beach Tours | Osimiri na-enwu enwu - Kpọọ Ugbu a 993-702-7574
Na-achọ inweta ọgwụgwọ na-eche nche? Sand Pebbles 'Odisha Beach Tours bụ azịza gị kacha mma. Odisha bụ otu n'ime obodo kachasị mma ọ ga-enwe ihe karịrị 485 kilomita nke ụsọ oké osimiri. Mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-edozi ya, nke ụfọdụ n'ime ájá kachasị ọcha na nke kachasị dị ọcha nke ụwa ga-enye. Sand Pebbles na-enye ihe kacha mma maka Odisha Beach Tours. Ọ bụ ebe kachasị mma ka ị na-etinye aka na ya mgbe ị na-anọrọ na anyanwụ. Site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọdụ ụgbọ elu na-arịwanye elu, osimiri Odisha na-aghọwanye ndị ọzọ, na-emepụta ụzọ na-enweghị ntụpọ ị ga-esi gaa njem nrọ gị. Odisha bụ njem dị ukwuu kwa afọ, na ihu igwe mara mma n'oge niile. Ọ bụghị naanị nke ahụ, nnukwu ụsọ oké osimiri n'ụsọ oké osimiri pụtara na ọdụ ntụrụndụ na Odisha dị iche iche dabere na ọnọdụ. Oké osimiri dị iche iche nke Odisha na-akwado site n'ịkwalite ụdị ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-ebi n'ụwa, ezigbo ụlọ iri nri na ntụrụndụ, na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka ndị njem nleta na ụdị ndụ niile na-achọ ezumike nke ndụ. Njem nlegharị anya Odisha na-ekpuchi ya. Enweghi uzo di nma iji nweta ihe uto nke uzo ndi a mara nma karia na uzo Sand Pebbles nke Odisha osimiri Tours.
Ihe nchịkọta ndị a na-ele ụfọdụ n'ime ebe ndị Odys kachasị mma ka ha na-enye, mgbe ha na-ewepụkwa gị n'okporo ụzọ a kụgburu. Ndị nduzi ihe ọmụma gị na - eduga gị na njem nlegharị na - agụnye ịnweta ụtọ nri na nri zuru oke na steeti. Enweghị ihe ọ bụla dịka igwu mkpịsị ụkwụ gị na ájá ma na-atụgharị na mbara ígwé dị ebube Asia. Nchegbu gị niile na nchegbu gị ga-asacha na mmiri na-acha anụnụ anụnụ, na-ahapụ gị na ọnọdụ obi jụụ nke ị maghị ike.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịnweta ịma mma na-adịghị agwụ agwụ nke nnukwu okooko osisi a, biko kpọtụrụ anyị taa ka anyị nyere gị aka ịchọta njem nleta Odisha zuru oke maka gị. Anyị na-enye gị ndị nlekọta njem nleta kacha mma na Odisha, gụnyere Beach Resorts na Odisha, ka i wee nwee ike ịnweta oge na Sand Pebbles 'Odisha Beach Tourism.
Odisha Beach Tour nchịkọta (N'uhie / 9 ụbọchị | 008 njegharị)
DAY 01: Bịa
Zute ma kelee gị mgbe ị bịarutere Kolkata Airport / Rail Station ma nyefe ya na họtel. Ezumike nke ụbọchị n'efu maka ọrụ nke aka gị. N'abalị na Kolkata.
Mgbe nri ụtụtụ na-aga na Kolkata na ụtụtụ ehihie na ọdụ ụgbọ oloko iji banye ụgbọ okporo ígwè ahụ na Balasore. Dopụta na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Balasore ma wega Chandipur. Lelee na nkwari akụ. N'abalị na Chandipur.
Buru ụbọchị zuru ezu na Chandipur Beach. N'abalị na Chandipur.
N'ụtụtụ mgbe ụtụtụ gachara njem na Bhubaneswar na-aga na-aga na Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (ụlọ nsọ Buddha na Stupas). N'abalị na Bhubaneswar
Nleta ụtụtụ na Temples na Bhubaneswar (Parsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital). Mgbe ahụ, gaa ụgbọala na-aga eleta Dhauli (Ashokan Edicts) & Pipli (Appliqué Work village). Ụgbọ mmiri abalị na nso osimiri na-ejikọta oké osimiri ma nọrọ jụụ n'akụkụ osimiri. N'abalị na Konark.
Mgbe nri ụtụtụ gara Konark Sun (Black Pagoda), Chandrabhaga Beach na Ramchandi Temple. Puri ịbanye na nkwari akụ. N'ehihie ehihie na-aga n'ụlọ Onyenwe anyị Jagannath ka ị soro Live Aalati Darshan. N'uhuruchi na-adabere na Golden Beach & Beach Market nke Puri. N'abalị na Puri.
Nleta ụtụtụ na Nna Jagannath (Ndị na-abụghị ndị Hindu ekweghị n'ime ụlọ nsọ ahụ), Okporo Ụzọ Ukwu Mgbe nri ụtụtụ gaa Gopalpur na-eleta Raghurajpur (Heritage village) na Chilika Lake na Barkul. Kwee ụgbọ mmiri na-asọba n'ime ọdọ ahụ iji lelee Kalijai Island & Nalaban Birds Island.Overnight na Gopalpur.
Mgbe nri ụtụtụ gaa Taptapani Hot Sulfur Spring. N'ehihie na-ekwu banyere Gopalpur Beach. N'abalị na Gopalpur.
DAY 09: Ịpụ - Berhampur Railway Station / Bhubaneswar Airport
Mgbe nri ụtụtụ gaa Berhampur Railway Station / Bhubaneswar Airport maka ịga n'ihu.